Budada Trestolone Acetate (6157-87-5) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Isbaarada "Trestolone Acetate" (MENT) ayaa ah steroid anabolic xoog leh. Sidoo kale waxaa loo yaqaan '7 alpha-methyl-19-nortestosterone' (budada MENT), waa steroid synthetic oo loo arko in uu yahay mid aad u awood badan oo jidhka ka sarreeya awoodda testosterone. Waxaa loo tixgeliyaa faa'iido ujeedada tababarka jidhka iyo tababarka xoogga.
Qalabka Trestolone Acetate (MENT) budada (6157-87-5) video
Budada Trastolone Acetate (MENT) budada (6157-87-5) Description
Budada Trestolone Acetate (MENT) budada ah, ayaa loo yaqaan 'Ment', waa maaddada 'stomoid anabolic-androgenic'. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa 7 alpha-methyl-19-taortestosterone (MENT), waa steroid synthetic oo loo arko in uu yahay mid aad u awood badan jidhka, taas oo ka sarreysa awoodda testosterone. Waxay joojisaa sii deynta gonadotrophin, waxay xakameysaa testosterone iyo shahwada. Hase yeeshee, HEP wuxuu bixiyaa daaweyn ku filan oo bedel ah oo loogu talagalay hawlaha ugu badan iyo kuwa ku-xidhan. Nooca budada ah ee loo yaqaan 'PENT MENT' wuxuu leeyahay nadiifinta dheef-shiid kiimikaad hooseeya oo ka yar testosterone, taas oo ka duwan tahay testosterone, MENT ma xirto hormoonka galmada xirmo globulin (SHBG). Root Trestolone Budada Acetate wuxuu weli awood u leeyahay aromatization (7-alpha-methyl-estradiol) oo lagu ilaalinayo faa'iidooyinka estrogen ee riyaaqa haweenka. Waxaa loogu talagalay kuwa jidh-dhiska iyo miisaaniyaadka culus ee u heellan inay helaan natiijo toosa oo isugu jira nafaqo, , iyo ficil fayow.
Budada loo yaqaan 'Trestolone Acetate (MENT) budada (6157-87-5) Smamnuucista
Product Name Budada Trastolone Acetate (MENT)
Magaca Kiimikada UNII-52XDF4N1XL; Orgasteron acetate; 52XDF4N1XL;
Fasalka Daroogada Androgen; Steroid anabolic; Qalabka Androgen; Progestogen; Antigonadotropin
Molecular Wsideed 330.468 g / mol
barafku Psaliid 447.571 ° C
Storage Temperature Ku keydi heer kulka qolka qabow
Application Waxaa loo isticmaalaa sida diyaarinta transdermal iyo / ama diyaargarowga
Waa maxay budada Trastolone Acetate (MENT) budada (6157-87-5)?
Baadhitaanka Isbaarada Acetate waa steroid anabolic xoog leh. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa 7 alpha-methyl-19-taortestosterone (MENT), waa steroid synthetic oo loo arko in uu yahay mid aad u awood badan jidhka, taas oo ka sarreysa awoodda testosterone. Waxaa loo tixgeliyaa faa'iido ujeeda ujeedada tababarka jidhka iyo xoogga, laakiin waxay la timaaddaa qiimo. Daawada budada Acetate waxay soo saartey sumcad badan sanadihii la soo dhaafay si ay u noqoto mid aad u xoog badan oo steroid ah. Waxay u maleyneysaa in xNUMX ay awood ka badan tahay testosterone joogta ah halka ay leedahay saameyn aad u yar. Trestolone Budada Acetate waxaa loo qaadan karaa qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan irbado iyo budo. Mustaqbalka, waa in laga helaa foomka afka. Qalabka Trestolone Acetate waxaa loogu talagalay kuwa jidh-dhiska iyo tababarayaasha miisaanka leh ee u heellan inay helaan natiijo toosa oo laga helo isku-dabarid cunto, isku-dabarid, iyo qaab nololeed.
Sidee budada loo yaqaan 'Trestolone Acetate (MENT)' budo (6157-87-5) shuqullada
Daawada Trestolone Acetate (MENT) waa dhab ahaan daawada daawada oo dhan. Ma muujinayso isdhexgal badan oo la leh Galmada Cudurka Galmada ee Globulin, taas oo micnaheedu yahay in qayb ka mid ah waa in la joogteeyaa oo firfircoonaa dhiigga. Sidoo kale, daroogadu waa foorar xoog leh oo loo yaqaan 'werogen reseptor', halka muujinaysa wax yar oo ka mid ah xasaasiyadaha hormoonnada progesterone iyo mineralocorticoid. Maadaama aysan awoodin in ay noqoto 5a-loo yareeyo qaab dihydro ah. Waxay u badan tahay inaysan sababi karin waxyeelo badan oo soo noqnoqda leh oo la xidhiidha Dihydrotestosteroe. Tani sidoo kale waa sabab macquul ah in ay yar tahay in la sameeyo baaritaanka qanjirka 'prostate', waxaana laga yaabaa in lagu tilmaamo daaweynta qaddiyadaha gaar ah ee qanjirka 'prostate'. Awoodda 7 alpha-methyl-19 nortestosteroe acetate (MENT) si loo kordhiyo miisaanka qanjirada prostate iyo jeexjeexyada jilicsan ee jiirka qoynta ah waxay ahayd afar jeer ka sareeya testosteroe, halka saameynta miisaanka bulbocavernosus iyo dheecaanka muruqa (murqaha ), wuxuu ahaa xilliyo 10 ah oo ka mid ah testosteroe.
Noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'Trestolone acetate' (MENT) budada daawooyinka aadanaha iyo qalabka loogu talagalay ka hortagga iyo daaweynta hoormoonka, gaar ahaan MENTAga 'Ac implant' iyo 'MENT transdermal gel' iyo 'patch transplant'. HOOYOOYINKA waxaa lagu nuugaa illaa seddex jeer heerka qiyaasta testosteroe - 17 testosteroe methyl and testosteroe 17-αmethyl.
Qalabka Trastolone Acetate (MENT) budada (6157-87-5) Qiyaasta
Iyada oo qiyaasta ugu badan ee 50 mgs maalintii, dadka isticmaala waxay filan karaan guulo badan mudo saddex bilood ah isticmaalka. Waxaa suurtagal ah in la kordhiyo heerarka xoogga iyo murqaha oo leh miisaanka korodhka macaamiisha 20 wakhtigaas.
Qiyaasta Trestolone Cycle Cycle Length, xitaa wareegga isbuuc ee 2 wuxuu yeelan doonaa natiijooyin muhiim ah. Toddobaadyada 4-6 waa mid ku haboon haddii aad rabto inaad sare u qaaddo horumarkaaga adiga oo aan kor u qaadin qadarka. Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee guys uma shaqeyn wakhti ka badan saacadaha 6 waa sababta oo ah uma dulqaadan karaan dhinacyada. Iyadoo Trestolone, dhinacyadani ma jiraan. Sidaa darted jadwalka dheera waa in ay noqdaan kuwo suurtogal ah
Budada Trastolone Acetate (MENT) budada (6157-87-5) Faa'iidooyinka
Trestolone Acetate / Pure powder waxaa loo qaadan karaa qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan irbado iyo budo. Mustaqbalka, waa in laga helaa foomka afka. Kuwa ku kalifay inay dhammaystiraan jirkooda, waxay raadin doonaan fursado kala duwan si ay u gaaraan ujeedooyinkooda jirdhiska. Isticmaalka Trestolone Acetate waa hal dariiq oo lagu gaari karo caato, lafdhabarta jirka oo leh kasbashada ugu badan ee murqaha. Waxaa lagu dari karaa kor uqaadayaasha kale si loo gaaro natiijooyinka ugu badan ee jarista iyo adkaanta jidhka jirkiisa. Waa suurtagal in la helo natiijooyin waxtar leh oo aan lahayn dhibaatooyin aan fiicnayn, sabab kale oo ay dad badani tijaabin doonaan Trestolone Acetate iyo steroids kale.
Intaa ka sokow, budada Trestolone Acetate / PENT waxay codsanaysaa daliilro balaadhan oo kala duwan, oo ay ka mid tahay, aan xadidneyn, shucaac la'aanta asaasiga ah, guuldareynta tijaabinta, ASIH, xajmiga, sarcopenia, luminta lafaha, murqaha lafaha iyo kachexia, BPH, kansarka qanjirka 'prostate'.
Soo iibso Trestolone Acetate (MENT) budada (6157-87-5) ka Buyaas.com